WhatsApp मा पासवर्ड कसरी राख्ने: methods विधाहरू जुन काम गर्दछन् मोबाइल फोरम
कसरी WhatsApp मा पासवर्ड राख्ने
डेनियल टेरासा | | सामाजिक सञ्जालहरू, WhatsApp
WhatsApp संसारमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको इन्स्ट्यान्ट मेसेजिंग अनुप्रयोग हो। हाम्रो जीवनको धेरै जसो यो रेकर्ड गरिएको छ, हाम्रो कुराकानी र कुराकानी समूहहरूमा। धेरै निश्चित निजी जानकारी जुन हामी निश्चित रूपमा सुरक्षित गर्न चाहन्छौं। त्यहाँ यो गर्न कुनै तरिका छ? उत्तर हो हो। हामी व्याख्या गर्दछौं कसरी WhatsApp मा पासवर्ड राख्ने।
एक अरब भन्दा बढी मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताहरू व्हाट्सएपको अविश्वसनीय सफलताको उत्कृष्ट प्रमाण हुन्। यो अनुप्रयोग दिनदिनै नयाँeको साथ सुधार गर्दछ रोचक संभावनाहरु। समयको साथ कुराकानी, अडियो, आवाज र भिडियो कलहरूको लागि क्लासिक विकल्पहरू सबै प्रकारको GIF, स्थान, आदि कागजातहरू साझेदारी गर्न थप गरिएको छ।
यसको अधिक प्राप्त गर्नका लागि व्हाट्सएप वेबको निश्चित मार्गनिर्देशन
यद्यपि अपेक्षाकृत हाल सम्म त्यहाँ कुनै तरिका थिएन ती सबै जानकारीको सुरक्षा गर्नुहोस् पासवर्ड, पिन वा समान प्रयोग गर्दै। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई स्पष्ट जोखिम खडा गर्‍यो, तिनीहरूलाई अनधिकृत प्रयोगकर्ताहरू द्वारा घुसपैठाहरूको बिरूद्ध असुरक्षित छोड्दै। केवल हाम्रो मोबाइल फोन पहुँच गरेर, एक जासूस वा गफ को रूपमा एक व्यवसाय संग जो कोही हाम्रो च्याट पढ्न सक्दछ, हाम्रो फोटो र भिडियो हेर्न, र हाम्रो सम्पर्कहरू थाहा छ।
भाग्यवस, आज हामीसँग यस समस्याको लागि राम्रो समाधानहरू छन्। अनुप्रयोगबाट मात्रै होइन, बाह्य स्रोतहरूबाट पनि जसले यी खाली ठाउँहरू भर्न पर्याप्त विकल्प प्रदान गर्दछ। यहाँ व्हाट्सएपमा कसरी पासवर्ड सेट गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरहरू छन्।
1 अनुप्रयोगबाट पासवर्ड सेट गर्नुहोस्
1.1 कुराकानी अभिलेख
1.2 स्क्रीन लक समारोह
1.3 दुई चरण प्रमाणिकरण
2 बाह्य अनुप्रयोगहरूको साथ पासवर्ड सेट गर्नुहोस्
2.2 कुराकानी +
2.4 सीएम सुरक्षा अनुप्रयोग
3 सल्लाह दिनुहोस् यदि तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा व्हाट्सएप प्रयोग गर्नुहुन्छ: सबै सत्रहरू बन्द गर्नुहोस्
अनुप्रयोगबाट पासवर्ड सेट गर्नुहोस्
२०१ update अपडेटमा, सुरक्षाको एक अतिरिक्त स्तर निजी व्हाट्सएप कुराकानीहरूमा पहिले नै थपिएको छ। यसले समावेश गर्‍यो, उदाहरणका लागि, एउटा नयाँ प्रकार्य जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुप्रयोगको सामग्री सुरक्षित गर्न पिन, फिंगरप्रिन्ट वा अनुहार पहिचान लक थप्न अनुमति दिन्छ।
सत्य यो हो कि प्रत्येक नयाँ अपडेटको साथमा व्हाट्सएपले यो र अनुप्रयोगका अन्य सुविधाहरू सुधार गर्दैछ। यस समयमा यी विकल्पहरू हुन् जुन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना सम्पर्कहरू र कुराकानीहरूको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ:
हाम्रो व्हाट्सएप च्याटको गोपनीयता को बारे मा चिन्ता मात्र सीमित हुन सक्छ केहि सम्पर्कहरू वा विशिष्ट कुराकानीहरू। यस अवस्थामा, अनुप्रयोग भित्र एक विकल्प छ जुन हामीलाई मद्दत गर्दछ यो जानकारी लुकाउनुहोस् पासवर्डको सहारा बिना नै अन्य व्यक्तिको झलक।
WhatsApp कुराकानी अभिलेख
यो एक निश्चित वा अपरिवर्तनीय प्रणाली होईन यदि हामी के चाहान्छौं भन्ने कुरा गोपनीयताको पूर्ण ग्यारेन्टी हो, तर यो सुरक्षाको पहिलो चरणको रूपमा पर्याप्त व्यावहारिक हुन सक्छ। यो तपाईं कसरी कुराकानी लुकाउन वा अभिलेख राख्न सक्नुहुनेछ। यसले सम्पर्कहरू लुकाउन पनि कार्य गर्दछ:
एन्ड्रोइडमा: हामी केवल कुराकानी वा कुराकानीहरू छनौट गर्दछौं जुन हामी लुकाउन चाहन्छौं "संग्रह" विकल्प प्रयोग गर्न, जुन मेनूमा फोल्डरको रूपमा आइकनको साथ देखा पर्दछ। यी कुराकानीहरू पछि पुन: प्राप्त गर्न, हामी कुनै पनि समय "संग्रहित च्याटहरू" फोल्डरमा जान सक्दछौं।
आईओएस / आईफोनमा: पहिले हामी कुराकानीलाई हेर्छौं जुन हामी लुक्न चाहन्छौं। मेनुलाई बाँयामा सार्नाले विकल्प "अभिलेख" देखा पर्नेछ। जब चयन गरिन्छ, यो स्वचालित रूपमा अभिलेखमा राखिन्छ, «अभिलेख कुराकानी» फोल्डरमा बचत हुन्छ, तर always अभिलेख »विकल्प प्रयोग गरेर फेरि उपलब्ध हुन्छ।
यो कुनै पनि केसमा नोट गर्नुपर्दछ यो विकल्प हुनुपर्दछ कहिले काँही मात्र प्रयोग गरियो। अन्यथा, यो दुरुपयोगले मोबाइलको भण्डारण ठाउँ ओभरलोडिing गर्ने जोखिमलाई चलाउँछ, जसले स्वाभाविक रूपमा यसको सही अपरेसनलाई असर गर्दछ।
स्क्रीन लक समारोह
यो समारोह हो आईओएस र एन्ड्रोइड उपकरणहरूमा उपलब्ध। यो अनुप्रयोग कन्फिगरेसन विकल्पहरूबाट सक्रिय हुनुपर्दछ। यो राम्रो प्रणाली हो तपाईंको सामग्रीलाई प्रिय आँखाबाट टाढा राख्नुहोस्।
नयाँ प्रकार्य सक्रिय गर्नका लागि यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
सबै भन्दा पहिले, यो आवश्यक छ व्हाट्सएप को पछिल्लो संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् अनुप्रयोग स्टोर वा गुगल प्ले मार्फत। यो संस्करण २.१ .2.19.21 .२१ हो।
एक पटक अपडेट डाउनलोड भएपछि तपाईंले खोल्नु पर्छ सेटअप मेनू, जसको संरचना प्रणालीमा निर्भर गर्दै अलिक फरक हुन सक्छ।
मेनूमा, विकल्प थिच्नुहोस् "बिल", जहाँ हामी असंख्य विकल्पहरूको साथ सूची फेला पार्नेछौं। सुरक्षा र गोपनीयतालाई सन्दर्भित गर्ने एउटा सानो कुञ्जीको प्रतिमाको साथ चिन्ह लगाइएको छ।
नयाँ मेनू भित्र जुन तल खुल्छ तपाइँले विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ "गोपनीयता", जो बदले हामीलाई खाता सुरक्षाको सन्दर्भमा उपलब्ध विकल्पहरू देखाउँदछ, जस्तै प्रोफाइल फोटो लुकाउने।
विकल्प जुन हामीले चयन गर्नुपर्दछ त्यो त्यो हो "स्क्रीन लक", जसले हामीलाई अनलक मोड छनौट गर्न अनुमति दिँदछ र समय स्वत: सक्रिय हुनको लागि यो समय बितिसकेको छ।
एकचोटि हामीले स्क्रिन लक सक्रिय गरेपछि, हामी केवल फेसब आईडी, टच आईडी (यी दुई मात्र आईओएसमा), फिंगरप्रिन्ट वा पासवर्डका साथ खोल्न सक्छौं। के हामीले पहिले निर्णय गरेका छौं।
दुई चरण प्रमाणिकरण
भर्खर व्हाट्सएपले पनि लागू गरेको छ दुई चरण प्रमाणिकरण, एक वैकल्पिक सुविधा र Android र आईफोन दुबै, प्रयोगकर्ता खाता को सुरक्षा लाई बढाउनको लागि डिजाइन गरिएको।
एक पटक यो सुरक्षा प्रणाली सक्षम भएपछि, प्रयोगकर्ताले their-अंकको पासवर्ड मार्फत व्हाट्सएपमा तिनीहरूको फोन नम्बर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। सुरक्षाको दोस्रो स्तरमा एक पुष्टिकरण सन्देश हुन्छ जुन ईमेलबाट आउँदछ।
यस तरिकामा WhatsApp मा पासवर्ड कसरी राख्ने? यो गर्नु पर्ने कुरा हो:
बटन क्लिक गर्नुहोस् menu (WhatsApp-डट आइकन व्हाट्सएपको माथिको दायाँ कुनामा अवस्थित) र विकल्प छनौट गर्नुहोस् "सेटिंग".
त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् "बिल" र विकल्प छनौट गर्नुहोस् "दुई चरण प्रमाणिकरण".
अन्तमा बटन थिच्नुहोस् "सक्षम" र तपाईंको छनौटको पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, एक रिकभरी ईमेल ठेगाना तपाइँको खाताको लागि प्रविष्ट गर्न सकिन्छ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई निम्न भिडियोमा थप दृश्यात्मक रूपमा वर्णन गरिएको छ:
बाह्य अनुप्रयोगहरूको साथ पासवर्ड सेट गर्नुहोस्
सुरक्षाको हिसाबले यी अनुप्रयोग सुधारहरू हुनु भन्दा पहिले धेरै प्रयोगकर्ताहरूले व्हाट्सएपमा पासवर्ड कसरी सेट गर्ने भन्ने समस्याका कारण बाह्य अनुप्रयोगहरूमा सहारा लिए। आज पनि त्यहाँ धेरै मानिस छन् जसले आफैंलाई प्रणाली भित्रको वैकल्पिक भन्दा बढी विश्वास गर्दछन्, विशेष गरी किनभने उनीहरूले केहि प्रस्ताव गर्छन् थप कार्यहरू। यी सब भन्दा विश्वसनीय छन्:
AppLock, हाम्रो मोबाइल फोनको सबै अनुप्रयोगहरूको पहुँच सुरक्षा गर्न
यो एप्लिकेसन केवल हाम्रो व्वाट्सएप च्याटहरू सुरक्षित राख्नको लागि व्यावहारिक मात्र हुनेछ, तर पनि हाम्रो मोबाइलमा कुनै पनि अनुप्रयोगमा पहुँच सुरक्षित गर्नुहोस्.
AppLock स्थापना प्रक्रियाको बखत, हामी कुन अनुप्रयोगहरू हामी पासवर्ड संरक्षण गर्न चाहान्छौं छनौंट गर्न सक्दछौं र ती प्रत्येकको लागि बिभिन्न चयन गर्न सक्दछौं। यो केवल एन्ड्रोइडको लागि उपलब्ध छ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: AppLock
कुराकानी + ले हामीलाई हाम्रो व्हाट्सएप रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ र उहि समयमा जिज्ञासुलाई "खोज" गर्छ
con कुराकानी +पिनको माध्यमबाट व्हाट्सएपमा पहुँच रोक्न सक्षम हुनुको साथसाथै हामीसँग एउटा धेरै उत्सुक र वास्तवमै रोचक कार्य हुनेछ: जसले अनुमति बिना हाम्रो च्याट सन्देशहरू पहुँच गर्न को लागी कोशिश गरिरहेको छ भनेर जान्ने।
यो कसरी सम्भव छ? यहाँ च्याटलोक को अद्भुतता आउँछ: अनुप्रयोग फोनको फ्रन्ट क्यामेरा प्रयोग गर्नुहोस् सावधानीपूर्वक र चुपचाप, व्यक्ति अनबक्स गर्न को लागी प्रयास गरिरहेको व्यक्तिको छवि क्याप्चर गर्दै। जासूस "शिकार" रातो हात हुनेछ। निस्सन्देह, यो धेरै sibylline विकल्प हो जुन व्हाट्सएप पासवर्ड सिस्टमले प्रस्ताव गर्दैन।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: कुराकानी +
को प्रयोगकर्ताहरूको लागि आईफोन, यो एक शानदार पासवर्ड प्रबन्धक हो जसले हामीलाई मास्टर पासवर्ड मार्फत हाम्रो जानकारी सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ। सबै चीजहरू नियन्त्रण गर्न एकल पासवर्ड।
व्हाट्सएपमा पासवर्ड कसरी राख्ने भन्ने प्रश्नको समाधानका साथै, 1Password लगइनहरू, क्रेडिट कार्डहरू, कागजातहरू, वाइफाइ पासवर्डहरू, सफ्टवेयर इजाजतपत्रहरू, इत्यादिको लागि पासवर्डहरू र पहुँच डेटा पहुँच गर्न यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिन्छ। सबै कुरा नियन्त्रण र सुरक्षितमा।
अवश्य पनि, यी अनुप्रयोगहरू विपरीत, यो भुक्तान गरिएको छ। यो नि: शुल्क -०-दिनको परीक्षण संस्करण प्रदान गर्दछ र त्यसपछि तपाइँले लगभग २- fee युरो को मासिक शुल्क तिर्नु पर्छ (मूल्य सटीक छैन, किनकि यो डलरमा गणना गरिन्छ)।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: 1Password
सीएम सुरक्षा अनुप्रयोग
सीएम सुरक्षा अपलक: गोपनीयता र भाइरस सुरक्षा
दुबै एन्ड्रोइड र आईओएसका लागि मान्य, सीएम सुरक्षा अनुप्रयोग यो यसको प्रकारको सब भन्दा राम्रो अनुप्रयोग मध्ये एक मानिन्छ। यसको ठूलो फाइदा यो हो कि, तपाईंको उपकरणमा सुरक्षा प्रणाली प्रदान गर्नु बाहेक, योसँगaछ निर्मित एन्टिभाइरस।
एक पटक अनुप्रयोग स्थापना भएपछि, हामी सजिलैसँग सन्देशहरू, सूचनाहरू, डाउनलोडहरू, आदि का लागि सबै सुरक्षा सेटि setहरू सेट गर्न सक्दछौं।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: सीएम Secutity अपलक
सल्लाह दिनुहोस् यदि तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा व्हाट्सएप प्रयोग गर्नुहुन्छ: सबै सत्रहरू बन्द गर्नुहोस्
अन्तमा, सुरक्षाको सम्बन्धमा अन्तिम सिफारिश: यदि हामी कम्प्युटरमा व्हाट्सएप प्रयोग गर्दैछौं र हामी यसलाई फेरि प्रयोग गर्ने योजना गर्दैनौं भने यो विवेकी छ। सबै सत्रहरू बन्द गर्नुहोस् हामीले खोल्यौं यसैले, हामी हाम्रो खातामा कुनै पनि अनाधिकृत पहुँचलाई कुनै पनि व्यक्तिले हाम्रो मोबाइलमा हाम्रो सहमति बिना पहुँच गर्न सक्दछन्।
कसरी सबै सत्रहरू बन्द गर्ने? धेरै सरल: हामी सेक्शन पहुँच गर्दछौं WhatsApp वेब र विकल्पमा «सत्रहरू» हामी ती सबै हटाउनेछौं जुन हामी फेरी प्रयोग गर्न सक्दैनौं। र जब श doubt्का लाग्छ, तिनीहरूलाई सबै मेटाउनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » सामाजिक सञ्जालहरू » कसरी WhatsApp मा पासवर्ड राख्ने
माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी फ्र्याक्सनहरू लेख्ने